Ku caawi joogitaanka qof weyn - adigu waa muhiim! - Lysekils kommun
Ku caawi joogitaanka qof weyn - adigu waa muhiim!
Adiga, qof weyn ahaan muhiim ayaa utahay bulshada. Xilliga xagaaga, carruurteenna iyo dhallinyarradeena banaan joogistooda ayaa badan, banaan imaashadiina isbedel weyn ayee keyneysaa. Kordhinta, banaan imaashada dadka waa weyn bulshada waxay ku leedahay saameyn xoogan xagga amniga waxayna siisaa fursad fiican qofka dhallinyarda ah inuu wax qalad ama rabsahdo ah in uu bulshada dhaxdeeda ku sameynin intoo ujeedo qof weyn.
Badi socodka banaanka!
Markaad tahay qof weyn, waxaad gacan ka geysan kartaa kordhinta nabadgelyada dadka kale adoo bannaanka u soo baxaya qaasatan jidadka iyo xaafadaha. Badi socodka baanaanka adoo whelsanaayo kuwa kale. Dabcan, waa inaan iska ilaalinaa inaan isla soo aadno kooxo badan, balse waxa rabnaa dadbadan oo rabaan iney banaanka iskula kulman meelaha dadka badanaa iskuugu imaadaan.
Waardiyaasha/shaqaalaha amniga banaanka ayee joogi doonaan!
Amniga iyo nabadgelyada waxey qeyb ka tahay degmada shaqadeyda sidaas darteed shaqaalo badan oo degmada ka shaqeeyo ayaa banaanka isugu soo bixi doono. Ayagoo banaanka joogi doono ku dhawaad xilliga gabalka oo dhacaayo iyo habeenada qaar xilli danbe. Sidoo kalne dhaqdhaqaaq badan ku sameyn doono meesha ee dhalinyarada iskugu imaato.
Hadaad rabto inaad laxiriirto shaqaalaha degmada, waxaad soo wici kartaa teleefonka amniga 0721-419001. Sidoo kalane haddii aad u baahan tahay inaad la xiriirto degmada inta lagu jiro saacadaha shaqada, waxaad wici kartaa qaybta soo dhaweynta adeegyada sooshalka ee xafiiska degmada: 0523-613000.
Dhacdooyinka deg-degga iyo talooyinka faldambiyeedka
Haddii ay dhacdo xaalad deg-deg ah ama dambiile socda, waxaa jira lambarka ah 112 oo la wici karo. Had iyo jeer booliska ayaa mas'uul ka ah dhowrista kala dambeynta bulshada iyo dhexgalka haddii ay dhacdo rabshooyin ama dambiyaal.
Markaad u warbixinaysid booliiska ama tallooyin faldambiyeed, wac 114 14.
Waxa kale oo aad u wici kartaa lambarka macluumaadka qaran ee 113 13 si aad talo u siiso, u wayddiiso ama uga warranto dhacdooyinka la xiriira bulshada.
Talo kusocto adiga waalid ka ah
Inbadan oo inaga mid ah oo sida joogta ah wax u qabta, ayaa waxey ka hortageysaa khatarta ah in dhallinyaradeenna ay ku dhacaan xaalado aan fiicnayn.
Daryeel - weyn iyo yarba. La shaqeey cunuggaaga. Sidoo kalane ka warhaay asxaabta cunugaada waxa ey qbtaan ama sameyaan? Xagee bay tagayaan habeenki iyo sabtiga iyo axada? Goorma - iyo sidee - ayay guriga ku yimaadaan?
La hadal cunugaaga oo si taxaddar leh u dhageyso. Ka hadal khataraha iyo dhibaatooyinka. Sameey goor hore, kahor intaysan la kulmin khamriga iyo maandooriyaha kaligood. Sidatan ayaad cunugga uga caawin kartaa inuu u diyaar garoobo maskax ahaan oo u yiraahdo maya. Tus in aad daryeesho oo aad xad u yeeshid.
Ha siin aalkolo/qamri hana u iibin. Dad badan oo dhalinyaro ah ma cabbi doonaan gabi ahaanba haddii la tusiyo xad cad. Inta badan dhalinyarada ayaa waliba aaminsan inay khaldan tahay in waalidku iibsadaan aalkolo/qamri. Way fiicnaan kartaa in la ogaado in had iyo jeer ay walaalo waaweeny jiraan oo ilmuhu weydiistaan.
"Qof kasta oo kale ayaa hela." Dhammaan dadka kale ma wada helaan. Dadka dhallin-yarada ah badanaa waxay u maleyyaan in saaxiibada ay cabaan qamri ka badan inta ay runtii khamri cabbaan. Dembiyada badankood waxaa lagu sameeyaa khamriga. Annaga oo ah dadka waaweyn, waxaan leenahay mas'uuliyad muhim ah in aan iska hubinno oo aan xad u yeelno dhallinyaradeena.
Cadeey oo xad u yeel. Dhamaan dhalinyarada waxay rabaan inay tijaabiyaan xuduudaha. Waa caadi in la noqdo dhallinyar dhib badan, laakiin sidoo kale waa caadi inaad noqoto waalid dhib badan. Markaad tahay qof weyn, waxaa ku saaran masuuliyad inaad dejiso xuduudaha cad oo aad dhahdo waxyaabaha wax yeeli kara oo khatar gelin kara mustaqbalka ilmahaaga iyo caafimaadkiisa. Waa daryeel, xitaa haddii ilmahaagu uusan kugu raacsanayn wakhtigaas.
Samee heshiisyo. Xagee la aadayaa yaana kala socda? Goorma iyo sidee baad guriga ku noqonaysaa? Miyaan ku qaadaa ama kuula kulmaa? Su'aalaha fikirka ah oo aan xakameyn ku dhisneyn, waxaad fursad weyn u leedahay inaad jawaabo hesho. Waqti ku heshiiya waana lagu dhageysa doonaa haddii qorshooyinka wax iska beddelaan. Haddii ilmahaagu meel kale oo seexan doono, wac waalidka saaxiibka cunugaaka oo fiiri.
Soo jeed oo diyaar u ahaw inaad soo qaadit. Diyaar u noqo inaad dhallintaada ka soo qaaddo xafladda, ama u diyaarso qof kale inuu sidaas sameeyo. Soo jeed oo la hadal daqiiqad markii ilmahaagu guriga yimaado.
La xiriir waalidiinta kale. Waxay ku siineysaa fursad aad kula falanqeyso dhibaatooyinka iyo xuduudaha dadka waaweyn. Waxay sidoo kale yareynaysaa halista in carruurtaada ay xafladda ka xaadiraan iyadoon waalidku oggolaan oo ay khamro ku heli karaan guryaha kale.
Bixi feejignaan dheeri ah markii loo baahdo. Tani waxay noqon kartaa xilliyada ku dhow xiritaanka dugsiga iyo fasaxyada xafladaha sida Halloween, Lucia, Sannadka Cusub, Valborg iyo Midsummer ama la xiriirta safarada fasalka iyo xerooyinka.
Baro sida loo tarjumo/garto calaamadaha. Dadka waaweyn badankood waxay u badan tahay inay gartaan astaamaha ah inuu qof cabay khamri, balse Daroogada ayaa adag in la garto. Sababtoo ah waalidiinta badankood ma eynan arag maandooriyaha daroogada oo mayqaanaan astaamaha ama calaamdaha lagu garto in oo qof isticmaalay daroogo. Astaamaha ma fududa in la garto oo la tarjumo daroogada. Balse calaamadaha qaarkood waxaa ka mid ah, sida daalka, gardarrada iyo xisaabtanka, sidaas ey tahay qasab ma ahan inay calaamdahaan noqdaan daroogada awgeed. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ogow dabeecadda isbeddelka ah ama haddii dhallintaada ay heshay saaxiibo kale.
Macluumaadka laga soo xigtay BRÅ, ka akhriso wax dheeraad ah: